May 20, 2019 - CeleLove
(၈) နှစ်လောက်နာနေတဲ့ ဒူးကို (၅)ရက်လောက် ဆေးစည်းလိုက်တာနဲ့ ပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ ဆေးနည်း..
May 20, 2019 Cele Love 0
(၈) နှစ်လောက်နာနေတဲ့ ဒူးကို (၅)ရက်လောက် ဆေးစည်းလိုက်တာနဲ့ ပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ ဆေးနည်း.. (၈) နှစ်လောက် ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒူးနာရောဂါ ကို (၅)ရက်လောက် ကုလိုက်တာ သက်သာပျောက်ကင်းသွားတဲ့ ဆိုတဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဒူးနာပျောက် ဆေးနည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ….။ ” ဒူးနာ ” မင်္ဂလာပါရှင် […]
ပူတဲ့အခါရေမသောက်လျှင် သေသွားနိုင်သော အပူလျှပ်ခြင်းအန္တရာယ်နှင့် သတိပြုစရာ အချက်များ…
ပူတဲ့အခါရေမသောက်လျှင် သေသွားနိုင်သော အပူလျှပ်ခြင်းအန္တရာယ်နှင့် သတိပြုစရာ အချက်များ… အပူလျှပ်တယ် ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူအများစုက နေပူထဲက ပြန်လာပြီး ရုတ်တရက် ရေချိုးလိုက်တာတို့ ၊ ‎ မျက်နှာသစ်လိုက်တာတို့ လို့ ထင်နေကြတယ်။ ရုတ်တရက် သတိလစ် အသက်ရှူရပ်သွားတယ်ပေါ့ …. ။တကယ်တမ်းတော့ အဲ့ဒါဟာ အပူလျှပ်တယ် […]
အံ့သြလောက်တဲ့ ဝိတ်ချနည်း… ပေါင်၃၆၀ လူဝကြီးကနေ ပေါင် ၁၆၀ကျော် အထိ ဝိတ်ကျလာရခြင်း..။
အံ့သြလောက်တဲ့ ဝိတ်ချနည်း… ပေါင်၃၆၀ လူဝကြီးကနေ ပေါင် ၁၆၀ကျော် အထိ ဝိတ်ကျလာရခြင်း..။ ZawGyiဖြင့်ဖတ်ရန် ကျွန်တော်ခင်မင်လေးစား တန်ဖိုးထားရပါသော ကျွန်တော်အားခင်မင်ကြသော fbမှချစ်ဆုံး friendများအတွက်ပါ …… ကိုအောင်ရေ တစ်ယောက်ထဲမှ ဟုတ်ရယ်လားမေးကြလွန်းလို့ပါ။ တအာဝရာကနေပိန်ဖို့ မလွယ်သလို ပိန်ရာကနေပြန်မဝဖို့ထိမ်းရတာ အတော်ခက်ခဲပါတယ်။ ကျွန်တော်အရမ်းဝလာတဲ့ အကြောင်းရင်း စပြောရမယ်ဆိုရင် […]
၁၈၇မိုင်ဝေးတဲ့ ဆေးရုံကို အမေနဲ့ညီ တင်ပြီး စက်ဘီးဖြင့်လိုက်ပို့ပေးတဲ့ ၁၃နှစ်အရွယ်ကောင်လေး
၁၈၇မိုင်ဝေးတဲ့ ဆေးရုံကို အမေနဲ့ညီ တင်ပြီး စက်ဘီးဖြင့်လိုက်ပို့ပေးတဲ့ ၁၃နှစ်အရွယ်ကောင်လေး အသက် ၁၃နှစ်အရွယ် Quyet Chien ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ သူ့ရဲ့ ညီဖြစ်သူ ၂လသားအရွယ်ကလေး ဆေးရုံတင်ရမယ်လို့ သိတဲ့အခါ အမေနဲ့ ညီလေးကို စက်ဘီးနဲ့တင်ပြီး Hanoi မှာရှိတဲ့ ဆေးရုံကို အမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ် …။ […]
တနေ့တော့ ဝဋ်လည်မှာပါ… ” ဝဋ်လည်ခြင်း ဆုလာဒ် ” ဂရုစိုက်တဲ့လူကို မင်းပစ်ပယ်တဲ့အခါ…… ဥပေက္ခာပြုတဲ့သူနဲ့ မင်း တွေ့ရလိမ့်မယ် …။ သည်းခံပေးမှန်း မင်းသိရက်နဲ့ အနိုင်ယူတဲ့အခါ …… သည်းမခံနိုင်တဲ့သူက မင်းကို ပြန်စော်ကားလိမ့်မယ် …။ သဝန်တိုတတ်သူကို မင်းမျက်ကွယ်ပြုမိတဲ့အခါ …… သဝန်မတိုတတ်သူက မင်းကို […]
အကြော်တစ်ခုကို ၅၀ပါ.. ၁၀၀ဖိုးကို ၃ ခု ထားလိုက် မရလို့ပါကွယ်..၂၀၀ ဖိုး ၅ ခုတော့ ထားလိုက်ပါလို့ ဈေးစစ်ပြီးနောက်
အကြော်တစ်ခုကို ၅၀ပါ.. ၁၀၀ဖိုးကို ၃ ခု ထားလိုက် မရလို့ပါကွယ်..၂၀၀ ဖိုး ၅ ခုတော့ ထားလိုက်ပါလို့ ဈေးစစ်ပြီးနောက် ကျွန်တော်နဲ့အကြော်သည်အမေကြီး” အမှတ်တမဲ့ပါပဲ..နားထဲခပ်သဲ့သဲ့ကြားလိုက်တာပါ..အကြော်တစ်ခုကို ဘယ်လောက်လဲ ? ကလေးတစ်ယောက်ကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်(ငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပုံစံမျိုးပါပဲ).အကြော်ဝယ်ဖို့မေးနေတဲ့ အသံပါ ။ အကြော်တစ်ခုကို ၅၀ပါ…၁၀၀ဖိုးကို ၃ […]
ခေါင်းလျော်ရည်ထဲဆားထည့်လျော်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာမည့်အကျိုး …
ခေါင်းလျော်ရည်ထဲဆားထည့်လျော်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာမည့်အကျိုး … ကျွန်တော်အားလုံး ဆားကို အိမ်က မီးဖိုချောင်ထဲမှာရနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းအဖြစ် လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆားမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ မသိသေးတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ များစွာရှိနေတာကိုတော့ လူသိနည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆားကို ခေါင်းလျော်ရည်ထဲမှာ ထည့်လျော်တဲ့အခါ ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော် …။ ၁ – […]
မြန်မာကိ်ုယ်စားပြု MISS တစ်ဦးအနေနဲ့ ဝေဖန်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့ ရှက်စရာ VIDEO
မြန်မာကိ်ုယ်စားပြု MISS တစ်ဦးအနေနဲ့ ဝေဖန်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့ ရှက်စရာ VIDEO Miss တွေဆိုတာဟာ Miss Crown ဆောင်းလိုက်ကတည်းက ကျန်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးထက် အစစအရာရာမှာ သာလွန်ပြည့်စုံကောင်းမွန်တာကြောင့် သရဖူနဲ့ထိုက်တန်စွာရွေးချယ်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း လူတွေအားလုံးက သိကြပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက လှပတဲ့အရည်အချင်းရှိပြုင်ပွဲဝင်တွေကို ကျော်လွန်ပြီးအရပ်တပါးမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြ်ိုင်ခွင့်ရတဲ့ Miss Myanmar ဆိုတာဟာလည်း […]
စင်ကာပူနိုင်ငံကပွဲတစ်ခုမှာ အလန်းစားဖက်ရှင်နဲ့ ဆုချီးမြှင့်ပေးနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယို ယောက်ျားလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မမသင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ အလန်းစားဖက်ရှင်တွေကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ဝတ်စားဆင်တတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်ခုန်ချင်စရာကောင်းတဲ့ စွဲမက်ဖွယ် ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ ဖမ်းစားတတ်တဲ့ မမသင်ဇာကတော့ မကြွေဘဲမနေနိုင်လောက်အောင် ညို့အားပြင်းလွန်းသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း သင်ဇာက သူမတူတဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ ပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကို တက်ရောက်နေတာပဲ […]
၁၅ နှစ်​သမီးကို အ​ဖေအရင်းက အကြိမ်​ကြိမ်​ အဓမ္မပြုကျင့်​မှု​ကြောင့်​ ကိုယ်​ဝန်​​လေးလရ …
၁၅ နှစ်​သမီးကို အ​ဖေအရင်းက အကြိမ်​ကြိမ်​ အဓမ္မပြုကျင့်​မှု​ကြောင့်​ ကိုယ်​ဝန်​​လေးလရ … မှော်ဘီမြို့နယ် ဝါးနက်ချောင်းကျေးရွာနေ အဖ ဦးသန့်ဇော်ဝင်း အသက်၃၈သည် ၄င်းသမီးအရင်းဖြစ်သူ မ====အား အကြိမ်အကြိမ်အခါခါ အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည် …. ။ ဖြစ်စဉ်မှာ အိမ်ရှေ့၌သားဖနှစ်အတူရှိစဉ်အဖေဖြစ်သူ ဦးသန့်ဇော်ဝင်းမှ အိမ်ထဲရှိ အဝတ်များပွနေ၍ သိမ်းဆည်းရန် ခေါ်သဖြင့် […]